Ukuhlanzwa ochokweni (1-32)
Ukuhlanzwa kwezindlu ezinochoko (33-57)
14 UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi: 2 “Lona kufanele kube umthetho wonochoko ngosuku lokuqinisekisa ukuthi uhlanzekile, lapho kufanele alethwe kumpristi. + 3 Umpristi uzophumela ngaphandle kwekamu, amhlole. Uma isifo sochoko selaphekile konochoko, 4 umpristi uzomyala ukuba alethe izinyoni ezimbili eziphilayo ezihlanzekile, ukhuni lomsedari, indwangu ebomvu nehisopi ukuze ahlanzwe. + 5 Umpristi uzoyala ukuba enye inyoni ibulawelwe esitsheni sobumba phezu kwamanzi agelezayo. 6 Kodwa kufanele athathe inyoni ephilayo kanye nokhuni lomsedari, indwangu ebomvu nehisopi, akugcobhoze konke egazini lenyoni ebulawelwe phezu kwamanzi agelezayo. 7 Uyobe eselifafaza kasikhombisa kulowo ozihlanza ochokweni athi uhlanzekile, akhulule inyoni ephilayo iye endle. + 8 “Ozihlanzayo kumelwe awashe izingubo zakhe futhi aphuce zonke izinwele zakhe ageze ngamanzi, ahlanzeke. Kamuva angangena ekamu, kodwa ahlale ngaphandle kwetende lakhe izinsuku eziyisikhombisa. 9 Ngosuku lwesikhombisa kufanele aphuce zonke izinwele ezisekhanda nasesilevini namashiya. Ngemva kokuphuca zonke izinwele zakhe, uzowasha izingubo zakhe ageze ngamanzi, abe ohlanzekile. 10 “Ngosuku luka-8, uzothatha amawundlu amabili angamaduna aphile kahle, iwundlu lensikazi elilodwa eliphile kahle + elingakawuqedi unyaka, izingxenye ezintathu eshumini ze-efa* likafulawa ocolekile oxutshwe namafutha njengomnikelo wokudla okusanhlamvu + nelogi* elilodwa lamafutha; + 11 umpristi othi lo muntu uhlanzekile uzoletha lo muntu ozihlanzayo kanye nale minikelo, phambi kukaJehova emnyango wetende lokuhlangana. 12 Umpristi uzothatha iwundlu elilodwa leduna alinikele libe umnikelo wecala + kanye nelogi lamafutha akuzulise njengomnikelo ozuliswayo phambi kukaJehova. + 13 Uzobe esehlaba iwundlu leduna endaweni okuvame ukuhlatshelwa kuyo umnikelo wesono nomnikelo oshiswayo, + endaweni engcwele, ngoba njengomnikelo wesono, umnikelo wecala ungowompristi. + Uyinto engcwelengcwele. + 14 “Ngemva kwalokho umpristi uzothatha elinye igazi lomnikelo wecala, aligcobe endlebeni yesokudla yalowo ozihlanzayo nasesithupheni sesandla sakhe sokudla nakubhozo wonyawo lwakhe lwesokudla. 15 Umpristi uzothatha amanye amafutha kulelo logi lamafutha + awathele esandleni sakhe sobunxele. 16 Umpristi uzobe esegcobhoza umunwe wakhe wesokudla emafutheni asesandleni sakhe sobunxele afafaze amanye alawo mafutha ngomunwe kasikhombisa phambi kukaJehova. 17 Amafutha asele esandleni sakhe umpristi uzowagcoba endlebeni yesokudla yalowo ozihlanzayo nasesithupheni sesandla sakhe sokudla nakubhozo wonyawo lwakhe lwesokudla phezu kwegazi lomnikelo wecala. 18 Okusele kwala mafutha asesandleni sompristi uzokugcoba ekhanda lalowo ozihlanzayo, umpristi amenzele isihlawulelo phambi kukaJehova. + 19 “Umpristi uzonikela umnikelo wesono, + amenzele isihlawulelo lowo ozihlanza ekungcoleni kwakhe, kamuva ahlabe umnikelo oshiswayo. 20 Umpristi uzonikela umnikelo oshiswayo nomnikelo wokudla okusanhlamvu + e-altare, amenzele isihlawulelo, + abe ohlanzekile. + 21 “Nokho, uma ehlupheka engenawo amandla anele, uzothatha iwundlu leduna elilodwa libe umnikelo wecala womnikelo ozuliswayo, ukuze azenzele isihlawulelo, okweshumi kwe-efa* likafulawa ocolekile oxutshwe namafutha njengomnikelo wokudla okusanhlamvu, ilogi lamafutha, 22 namahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba, kuye ngamandla akhe. Elinye lizoba umnikelo wesono elinye libe umnikelo oshiswayo. + 23 Ngosuku luka-⁠8, + uzokuletha kumpristi emnyango wetende lokuhlangana phambi kukaJehova ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhlanzekile. + 24 “Umpristi uzothatha iwundlu leduna lomnikelo wecala + nelogi lamafutha, akuzulise njengomnikelo ozuliswayo phambi kukaJehova. + 25 Umpristi uzobe esehlaba iwundlu leduna lomnikelo wecala, athathe elinye igazi lomnikelo wecala aligcobe endlebeni yesokudla yalowo ozihlanzayo nasesithupheni sesandla sakhe sokudla nakubhozo wonyawo lwakhe lwesokudla. + 26 Umpristi uzothela amanye amafutha esandleni sakhe sobunxele, + 27 ngemva kwalokho afafaze ngomunwe wakhe wesokudla amanye ala mafutha asesandleni sakhe sobunxele kasikhombisa phambi kukaJehova. 28 Umpristi uzogcoba amanye ala mafutha asesandleni sakhe endlebeni yesokudla yalowo ozihlanzayo nasesithupheni sesandla sakhe sokudla nakubhozo wonyawo lwakhe lwesokudla ezindaweni ezifanayo nalezo agcobe kuzo igazi lomnikelo wecala. 29 Okusele kwala mafutha asesandleni sompristi uzokugcoba ekhanda lalowo ozihlanzayo ukuze amenzele isihlawulelo phambi kukaJehova. 30 “Uzonikela elilodwa lalawo mahobhe noma lalawo maphuphu amajuba kuye ngamandla akhe, + 31 elilodwa anamandla alo, libe umnikelo wesono elinye libe umnikelo oshiswayo + kanye nomnikelo wokudla okusanhlamvu; umpristi enzele lowo ozihlanzayo isihlawulelo phambi kukaJehova. + 32 “Lona umthetho ophathelene nalowo obenesifo sochoko kodwa ongenawo amandla lapho kuqinisekiswa ukuthi uhlanzekile.” 33 Ngemva kwalokho uJehova wathi kuMose no-Aroni: 34 “Lapho nifika ezweni laseKhanani + engininika lona njengefa, + bese ngingcolisa indlu esezweni lenu ngesifo sochoko, + 35 umnikazi wendlu kufanele eze athi kumpristi, ‘Kuvele ukungcola kohlobo oluthile endlini yami.’ 36 Umpristi uzoyala ukuba kukhishwe konke okusendlini ngaphambi kokuba eze azohlola ukungcola, ukuze angathi konke okusendlini kungcolile; ngemva kwalokho uzongena ahlole indlu. 37 Uzohlola indawo ethintekile, uma izindonga zendlu zingcoliswe izifaca eziluhlaza ngokuphuzi noma ezibomvana, futhi zibonakala zishone phakathi kunodonga, 38 uzobe esephuma endlini aye phambi komnyango wendlu, indlu ayivale izinsuku eziyisikhombisa. + 39 “Ngemva kwalokho umpristi uzobuya ayihlole ngosuku lwesikhombisa. Uma ukungcola kusabalele ezindongeni zendlu, 40 umpristi uzobe esekhipha imiyalo futhi amatshe angcolile kumelwe aqheshulwe aphonswe ngaphandle kwedolobha endaweni engcolile. 41 Kufanele ayale ukuba indlu iphalisiswe ngaphakathi, ukhonkolo nodaka olomile abalugebhulile kufanele kulahlwe ngaphandle kwedolobha endaweni engcolile. 42 Bayobe sebefaka amanye amatshe endaweni yamatshe abawakhiphile, futhi kufanele asebenzise udaka oluhlukile bese eyala ukuba indlu iphahlekwe. 43 “Nokho, uma ukungcola kubuya futhi kuphinde kuqubuka endlini ngemva kokuqheshulwa kwamatshe nangemva kokuphalwa kwendlu nokuphahlekwa kwayo kabusha, 44 umpristi uzongena kuyo ayihlole. Uma ukungcola kusabalele endlini, nguchoko olubulalayo + olukuleyo ndlu. Indlu ingcolile. 45 Uzobe eseyaleza ukuba leyo ndlu idilizwe—amatshe ayo, izingodo zayo nawo wonke ukhonkolo nodaka olomile lwendlu—kuthwalwe kuyiswe ngaphandle kwedolobha endaweni engcolile. + 46 Kodwa noma ubani ongena kuleyo ndlu nganoma yiluphi usuku evalwe ngalo umpristi + uzoba ongcolile kuze kuhlwe; + 47 noma ubani olala kuleyo ndlu kufanele awashe izingubo zakhe, noma ubani odlela kuleyo ndlu kufanele awashe izingubo zakhe. 48 “Nokho, uma umpristi eza afike abone ukuthi ukungcola akusabalalanga endlini ngemva kokuphahlekwa kwayo kabusha, uyobe esethi leyo ndlu ihlanzekile ngoba ukungcola akusekho. 49 Ukuze ahlanze indlu ekungcoleni,* uzothatha izinyoni ezimbili, ukhuni lomsedari, indwangu ebomvu nehisopi. + 50 Kufanele abulalele enye inyoni esitsheni sobumba phezu kwamanzi agelezayo. 51 Ngemva kwalokho uzothatha ukhuni lomsedari, ihisopi, indwangu ebomvu nenyoni ephilayo akugcobhoze egazini lenyoni ebulewe nasemanzini agelezayo, akufafaze ngasendlini kasikhombisa. + 52 Uzohlanza indlu ekungcoleni* ngegazi lenyoni, amanzi agelezayo, inyoni ephilayo, ukhuni lomsedari, ihisopi nendwangu ebomvu. 53 Uzobe esededela inyoni ephilayo ngaphandle kwedolobha iye endle enzele indlu isihlawulelo, ibe ehlanzekile. 54 “Lona umthetho ophathelene nanoma yisiphi isifo sochoko, isifo sekhanda noma sentshebe, + 55 uchoko olusengutsheni + noma olusendlini, + 56 ukuvuvukala, uqweqwe namabala, + 57 ukuze kwaziwe lapho okuthile kungcolile nalapho kuhlanzekile. + Lona umthetho ophathelene nochoko.” +
^ Okuthathu eshumini kwe-efa kwakulingana no-6,6 L. Bheka iSithasiselo B14.
^ Ilogi lalilingana no-0,31 L. Bheka iSithasiselo B14.
^ NgesiHebheru, “esonweni.”